झूटो निवेदनको नकारात्मक प्रभाव | चितवन पोष्ट दैनिक
झूटो निवेदनको नकारात्मक प्रभाव
२०७० चैत्र ६, बिहीबार ०४:०६ गते
भदौ–असोजको घाम, दर्छा पाल्पाको घिमिरे वनको बाक्लो वन भए पनि सूर्यको प्रचण्ड तापले अति गर्मी हिँडाइपछि थकाइ मार्न देवीथानको चौतारी साँच्ची नै स्वर्गझैँ लाग्दछ । देवीथानको वरिपरिको खेतमा लहलाउँदो पसाउन लागेको धान खेतबाट आएको मगमग बसाउने वासना, आहा ! कत्ति मीठो !
पूर्ण दर्छा, फूलबारी, गैलुक, गिजिनडाँडा, मौलाथर, लाङ्ताङ्, खरक, टुभाग, ओइरेघाटका गाउँलेहरु नुन, तेल, कपडा, लत्ता, गिट्टी, बालुवा, रड, छड लिन, डाक्टर औषधि, बस गाडी चढ्न रामपुर नै पुग्नुपर्छ । घिमिरे वनको ओरालो झरेपछि, उकालो चढ्नअघि बटुवाहरु यही एकछिन भए पनि विश्राम गर्दछन् । आफूले बोकी आएको खाजासाजा, पानी पनि खाने गर्दछन् । कोही पछ्यौरी या हातको सिरानी लगाएर पल्टन्छन्, सुत्छन् । थकाइ मरेपछि आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छन् ।
लगभग ५०–६० वर्षका महिलाहरु, भारतीय सेनाका विधवाहरु रहेछन् । पोखरा पेन्सन क्याम्पबाट श्रीमान्को देहान्तपछि पेन्सन नपाउने भन्ने खबर लिएर आएका त्यही चौपारीमा पहाडजस्तो बाँकी जीवन कसरी बिताउने भन्ने आफन्तसँग र त्यहाँ बसेका बटुवाहरुसँग अपरिचित भए पनि दुःखेसो पोखिरहेका थिए । नम्बर २५२८ १÷९ जीआर को देहान्त २०४६ भदौपछि पेन्सनको हकदार पत्नीहरु नै हुन् । किन पेन्सन पाएनन्, मनमा मेरो जिज्ञासा जाग्यो । कुरैकुरामा दर्दनाक घटनाक्रम थाहा भयो ।
नायक श्री दानबहादुर शाही (खुइले गुरूजी) ले पोखरा पेन्सन क्याम्पमा गएर आफ्नै कालगतिले मेरा दुवै पत्नीहरु मरिसकेछन् भनी निवेदन दिएर आएछन् । श्री मनकुमारी शाही, श्री खुमकुमारी शाही मरेछन् भनेर किन लेखेछन् त, जिज्ञासाको कुरा !
भूतपूर्व सैनिकहरुले पेन्सन कुडाघाट, गोरखपुरमा लिन जानुपर्दथ्यो । पछि १९७०–१९७१ तिर पोखरा, भरतपूर र काठमाडौँमा पेन्सन पेइङ अफिस खुलेपछि मान्छेहरु आफ्नो अनुकूल पर्ने क्याम्पमा गएर पेन्सन लिन्थे । यसै पेन्सन लिन जाने क्रममा नायक श्री दानबहादुर शाही पोखरा गएको बेला घरमा राखेको खसी किन्ने मान्छे आएको घरमा खसी सल्लाह पनि भएको भनेको भन्दा बढी दाममा खसी लाने ग्राहक पाएपछि भेजा गरी मासु दिनुभन्दा गाउँमै खसीलाई बढी दाममा दिन मिल्ने हुँदा खसी बेचिदिएछन् ।
पन्ध्र दिनपछि पेन्सन लिएर आउँदा गोठमा बाँधेको खसी नदेख्दा पत्नीहरुले आफू नहुँदा व्यवहार गर्न लागेछन् भनी ठानी आफू नभएको बेला पत्नीहरुले खसी बेचेछन् भन्ने रिसले उसैबेला पोखरा क्याम्पमा गएर आफ्नै कालगतिले मेरा दुवै पत्नीहरु मरिसकेछन् भनेर निवेदन दर्ता गराएर आएछन् । यस्तो अवस्थामा कसरी जीवित पत्नीहरुले पेन्सन पाउने ? यस्तो कुरा सुन्दा म स्तब्ध भएँ । महिलाहरुमाथि भएको अपराध, यातना, अत्याचार, दबाब, शोषण !
जहाँ पनि जहिले पनि महिलाहरुले भोग्नु परेको दुःख, कष्टहरुको पोको यति ठूलो रहेछ । उड्दै गरेको खबरले मेरो मनलाई झनै अशान्त बनायो । श्रीमान्ले पत्नीहरु मरे भनेर पेन्सनको अफिसमा लेखेको कुरा एक कान, दुई कान हुँदै दुवै पत्नीहरुले सुने, गाउँलेहरुले सुने । यस्तो अपमानित भएर के बाँच्नु भन्दै भीरतिर घाँस काट्न गएकी जेठी पत्नी मनकुमारी शाहीले घाँसको भारी ल्याइन । २०५१ साल महिनामा गाउँलेहरुले उसको चिथ्राचिथ्रा लास, ओढेर गएको आफ्नो भदै सुबेदार छविलाल रानाले दिएको सलमा पोको पारेर ल्याए ।
कान्छी खुमकुमारी शाही भने जसोतसो बाँचेकी छे । उनले भन्छिन् ः
“दिदीझैँ मेरो ठूलो मुटु छैन, यसैले हाम फालेर मर्न डर लाग्छ । लज्जित, अपमानित भएर बाँच्नु बाध्यता छ ।’’
यस्तै श्रीमान्हरुले गरेको धोखा, लापरबाही, गैरजिम्मेवारीमा परेका २५००÷३००० को हाराहारीमा विधवा महिलाहरु छन् । यसले गर्दा भारत सरकारले दिएको पेन्सन र अनेक सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनु परेको छ । यो कस्तो विडम्बना हो !